China Double Inaliti yokubumba yoMvelisi kunye noMthengisi | Mestech
Ziphene yokubumba kabini yinkqubo yokubumba yeplastiki apho iiseti ezimbini zomngundo zifakwa ngaxeshanye kumatshini wenaliti enye ukwenza icandelo elinye lezinto ezimbini ezahlukeneyo zeplastiki.
Inaliti yokubumba kabini (ikwabizwa ngokuba kukudubula kabini, inaliti enemibala emibini).
Inaliti yokubumba yinkqubo yokubumba yeplastiki apho iiseti ezimbini zomngundo zifakwa ngaxeshanye kumatshini omnye wenaliti ukwenza icandelo elinye lezinto ezimbini ezahlukeneyo zeplastiki. Ngamanye amaxesha ezi zinto zimbini zinemibala eyahlukeneyo, ngamanye amaxesha izinto ezimbini zinobukhuni obahlukeneyo kunye nokuthamba, ngaloo ndlela kufunyanwa iipropathi zoomatshini ezifunekayo kunye nobuhle bemveliso.
Ukusetyenziswa sokubumbela-inaliti zeplastiki kunye nezahlulo
Iindawo zeplastiki ezivelisiweyo nangona zisenziwa ngenaliti kabini zisetyenziswe ngokubanzi kwiimveliso ze-elektroniki, izixhobo zombane, iimveliso zonyango, izixhobo zombane zasekhaya, iithoyi kunye nazo zonke ezinye iiplastikhi. Ukuveliswa kunye nokubumba okubumba-mbala, kunye nophando kunye nophuhliso loomatshini bokubumba inaliti-zombala kunye nezinto ezingafunekiyo zokubumba imibala emibini kunye nazo ziphuhliswe ngokukhawuleza.
Bonisa imeko yamalungu enaliti kabini
Iindidi ezimbini zeeplastikhi zisetyenzisiwe, kwaye iimveliso zeplastiki ezinokucaciswa ngokucacileyo phakathi kwezi ndidi zimbini zeplastikhi zibizwa ngokuba ziinaliti ezimbini.
Yintoni na inzuzo ziphene ziphene sukube?
Xa kuthelekiswa nenkqubo yenaliti yokubumba, izinto ezimbini zokubumba inaliti yokubumba inezinto zilandelayo:
1. Imaleko yangaphakathi neyangaphandle yamalungu amkela izinto ezahlukeneyo ezineempawu ezahlukeneyo, ezinje ngalawo anamandla alungileyo kubume bangaphakathi kunye nalawo anemibala okanye iinkozo kumphezulu wangaphandle, ukuze kufumaneke ukusebenza okupheleleyo nokubonakala kokusebenza.
2.Ulungelelwaniso lwento ethambileyo eyomeleleyo: Elona bhunga liyinxalenye lisebenzisa izinto ezilukhuni, indawo ehambelana nendibano isebenzisa i-resin ethambileyo (i-TPU, i-TPE) inokudlala isiphumo esihle kakhulu sokutywina kwimveliso, efana nokungena manzi, ukungqinisisa uthuli.
3. Ngokweempawu zokusetyenziswa ezahlukeneyo, ezinje ngomaleko womphezulu wamalungu anzima usebenzisa i-resin yeplastiki ethambileyo, umzimba okanye isiseko secandelo sisebenzisa intlaka yeplastikhi okanye iplastikhi enegwebu kungabunciphisa ubunzima.
4. Izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni zinokusetyenziselwa ukunciphisa iindleko.
5.Izinto ezingundoqo zecandelo zingasebenzisa iipropathi zomhlaba ezibizayo nezikhethekileyo, ezinje ngokuphazamiseka kokulwa nombane, ukuqhuba okuphezulu kunye nezinye izinto ukonyusa ukusebenza kwemveliso.
5. Umphezulu okanye undoqo wamalungu unokwenziwa ngezinto ezibizayo ezineempawu ezizodwa, ezinje ngokuthintela ukuphazamiseka kombane, ukuqhuba okuphezulu kunye nezinye izinto ukonyusa ukusebenza kwemveliso.
6. Ukuxubeka ngokuchanekileyo kwezinto zecortical kunye nezinto ezingundoqo kunokunciphisa uxinzelelo lwentsalela, kwandise amandla oomatshini okanye iipropathi zomhlaba zamalungu.
7. Xa kuthelekiswa nokugqithisa, kunenzuzo enkulu kumgangatho, indleko kunye nemveliso.
Ukusilela ziphene yokubumba
1. Kuyimfuneko ukutyala imali ekuthengeni umatshini wokubumba ngenaliti kabini.
2. Ukuthelekiswa kokubumba ngenaliti ezimbini kufuna ukuchaneka: ukungunda ngasemva kuneemfuno ezifanayo. Xa imveliso ineenguqu kuyilo, zombini ukungunda kufuneka wenze utshintsho olufanayo ukuqinisekisa okufanayo. Oku kongeza umthwalo emsebenzini kulondolozo lwabafayo.
3.Ukubumba ngenaliti kabini kukuba isibini sokubumba sabelana ngendawo kunye namandla kumatshini wokubumba ofanayo, ke iimveliso ezinkulu azinakufakwa.
Umahluko phakathi ziphene inkqubo yokubumba kunye nenkqubo overmolding
Ziphene yokubumba kunye overmolding zombini ziphene ziphene yokubumba, kodwa zahluke kakhulu.
1. Inkqubo overmolding ngumngundo, okwabizwa ngokuba yokubumba yesibini, lwenziwa koomatshini ziphene ziphene yokubumba. Imveliso yenziwe ngamanqanaba amabini. Emva kokuba imveliso isuswe kwiseti enye yomngundo, ibekwa kolunye uhlobo lwesibumba sokubumba ngenaliti yesibini. Ngoko ke, umatshini ziphene yokubumba esetyenziselwa inkqubo overmolding.
2.Ukubumba ngenaliti kabini kukuba iintlobo ezimbini zezinto zeplastiki zitofwa kumatshini wokubumba ofanayo, ukwenza kabini, kodwa imveliso iphuma kube kanye. Ngokubanzi, olu hlobo lwenkqubo yokubumba ikwabizwa ngokuba yinxalenye yokubumba yenaliti, edla ngokugqitywa ziiseti ezimbini zokubumba kwaye ifuna umatshini okhethekileyo wenaliti yokubumba.
3.Ukubumba ngenaliti kabini yindlela eqhubekayo yemveliso. Ayinakho ukusebenza kokuthatha kunye nokubeka iinxalenye phakathi, konga ixesha kunye nempazamo yokubeka kwakhona iinxalenye, kunciphisa kakhulu izinga lokuveliswa okungalunganga, kwaye kuyaphucula kakhulu umgangatho wemveliso kunye nokusebenza kwemveliso ngokuthelekiswa nenkqubo yokubhukuqa.
4. Inkqubo yokugqithisa ifanelekile ukubumba inaliti yeemveliso ezineemfuno ezisemgangathweni kunye neeodolo ezincinci. Inikwe umda kukubalula komatshini wenaliti yokubumba kabini, ayiakulungelanga ukubumba iinxalenye ezinkulu.
5. Ukubumba okungaphambili okubini ngenaliti kufuneka kufane ngokufanayo, kwaye ukubumba okusongelayo akunayo le mfuno. Ke ngoko, ukuchaneka kunye neendleko zokubumba ngenaliti kabini ziphezulu kunaleyo ebunjiweyo yenaliti yokubumba.
Iingcebiso zenkqubo yokubumba ngenaliti:
1. Kwinkqubo yokubumba inaliti yenaliti, kukho izinto ezine ezibalulekileyo: umatshini wokubumba ngenaliti, inaliti yokubumba, izinto zeplastiki ezifanelekileyo kunye noyilo lwengxenye efanelekileyo.
2. Ukhetho lwezixhobo zerabha ethambileyo kunye nenzima yokubumba ngenaliti Kufuneka kubekho umahluko phakathi kobushushu phakathi kwendawo yokunyibilika yeentlobo ezimbini zezinto zokubumba inaliti enemibala emibini. Ngokubanzi, kuyacetyiswa ukuba indawo yokunyibilika kwezinto zokuqala inaliti iphakame kunaleyo yesibini yenaliti, kwaye indawo yokunyibilika kwezinto zokuqala ngenaliti iphakame kunaleyo yesibini yenaliti.
3.Ukulandelelana kwenaliti kwento ecacileyo nengabonakaliyo: eyokuqala yayenziwe ngezinto ezingabonakaliyo, ize eyesibini yenziwa ngezinto ezibonakalayo. Umzekelo, izinto ezingafihliyo zihlala zi-PC ezinobushushu obuphezulu bezinto, kwaye i-PMMA okanye iPC isetyenziselwa into yesibini ebonakalayo. I-PC kufuneka ikhuselwe ngokutshiza i-UV. I-PMMA inokukhetha i-UV okanye ukuqina. Ukuba kukho abalinganiswa ngaphezulu, kufuneka bakhethe i-UV.
Yintoni umatshini-ziphene yokubumba?
Umatshini ziphene yokubumba kunye imiphanda ezimbini kunye nenkqubo inaliti kunye nendlela yokutshintsha indlela ngumngundo kuthiwa kabini-ziphene umatshini yokubumba, esetyenziselwa imibala-kabini ziphene sukube. Inaliti koomatshini yokubumba zihlala zineentlobo ezimbini:
Yintoni ukungunda ngenaliti?
Ukubumba okufaka iintlobo ezimbini zeeplastiki ngokulandelelana kunye nokuvelisa iimveliso ezinemibala emibini kuthiwa kukungunda kwemibala emibini. Inwebu emibini yenaliti yokubumba ihlala iseti yokubumba yenxalenye enye, ehambelana nesibetho sokuqala kunye nesibini ngokwahlukeneyo. Ukufa okungasemva (ukusweleka kwamadoda) kwaba babini kusweleka kuyafana, kodwa ngaphambili kufe (abasetyhini bafe) kwahlukile.
Ukubumba ngenaliti kufuneka kufakwe kumatshini wokubumba ngenaliti kabini ukuze kuveliswe ngesiqhelo.
Iingcebiso kuyilo loMngundo wenaliti kabini
1.Umbindi wokungunda kunye nesisu
Inxalenye yokubumba yenaliti ephindwe kabini yenaliti iyafana naleyo yokubumba ngenaliti. Umahluko kukuba ukubetha kwenaliti kwiindawo ezimbini kufuneka kuthathelwe ingqalelo njengakufanayo, kwaye ukungunda kwe-concave kufuneka kusebenzisane kakuhle neepunch ezimbini. Ngokubanzi, olu hlobo lwamalungu eplastiki lincinci.
INDLELA YOKUHLALISA IBINI
2. Inkqubo yokukhutshwa
Kuba iinxalenye zeplastiki ezinemibala emibini zinokutshatyalaliswa kuphela emva kwenaliti yesibini, isixhobo sokonakalisa isixhobo esisisiseko senaliti asizukusebenza. Kumatshini ojikelezayo wenaliti ojikelezayo, isixhobo sokukhupha isixhobo somatshini sinokusetyenziselwa ukukhutshwa. Umatshini wenaliti ojikelezayo othe nkqo, isixhobo sokukhupha isixhobo sokukhupha isixhobo somatshini esingenakusetyenziswa. Inkqubo yokukhutshwa ngokucinezelwa kwe-Hydraulic ejection inokumiselwa kwitafile ejikelezayo.
3. Gating Inkqubo
Ngenxa yokubumba ngenaliti kabini, inkqubo yokugaya yahlulwe yinkqubo yenaliti enye kunye nenkqubo yenaliti yesibini, ngokulandelelana ezivela kwizixhobo ezimbini zokubumba.
I-4, ukungqinelana kweziseko zokubumba Ngenxa yokuba indlela yokubumba yenaliti ikhethekile, kufuneka isebenzisane kwaye ilungelelanise enye nenye, ke ubukhulu kunye nokuchaneka kwezi zimbini zezixhobo zokukhokela kufuneka zihambelane. Kwizitena zeenaliti ezijikelezayo ngokuthe tyaba, ukuphakama kokuvunda komlinganiso kufanele ukuba kube ngokufanayo, kwaye iziko lokungunda ezimbini kufuneka libe kwiredi efanayo eguqukayo, kwaye umahluko ngu-180. Kumatshini wokubumba ojikelezayo ngokuthe nkqo, izibini ezibini kufuneka ibekwe kwi-axis efanayo.
Uphuhliso yokubumba yenaliti kabini
Ukusuka kwiimpawu kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yokubumba inaliti enemibala emibini kunye nezinto ezimbini zokubumba inaliti, kunokubonwa ukuba kuya kubakho imeko yokutshintsha ngokuthe ngcembe inkqubo yokubumba yenaliti kwixa elizayo. Innovative technology ziphene sukube nje kuphucula ngqo inkqubo ziphene sukube, kodwa kuvula intsimi yenkqubo ziphene sukube. Izixhobo zokukhupha izinto ezintsha kunye neenkqubo zanele ukuhlangabezana neemfuno ezandayo zeemveliso ezahlukeneyo, ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphezulu.
IMestech inikezela ngenaliti kabini yenkunkuma kumatyala eemoto, oonokrwece bezixhobo eziphathwayo, izithethi zezithethi, amaqhosha aphambili, izibambo kunye neminye imibala enemibala emibini okanye izinto ezimbini zeminyaka, nceda unxibelelane nathi ukuba unemfuno.
Egqithileyo Umatshini wenaliti yeplastiki
Okulandelayo: Iindawo zeplastiki zesibane esingenasithunzi
Ukucwangciswa kweposi ngaphezulu kweeplastiki
Ukuprintwa kwesilkiscreen kunye nokuhonjiswa kwepateni ye ...
Izahlulo zeplastiki elektroniki
Isithethi somsindo izindlu zeplastiki
Plastic Inaliti ziphene sukube
Iindawo zeplastiki zesibane esingenasithunzi